Negesi isitofu engabizi: kukhethwa imodeli, incazelo, ukubuyekezwa
Izingxenye engabizi zasendlini akuvamile ehlotshaniswa nemikhiqizo eliphezulu. Ngokuvamile, le divayisi isethi sakugcina izici, umkhiqizo ongaphakeme kanye nomklamo ejwayelekile. Nokho, ekuncintisaneni okushubile uphika abakhiqizi ukwandisa isabelomali kanye Ukucaciswa imikhiqizo. Umklamo yesimanje is kwahambisana by igesi isitofu engabizi ne zokuvikela zakamuva, futhi ine umthamo okwanele lolo inkonzo jikelele. Uma ngaphambili ezihlukahlukene amapuleti kubhekwa ezikhanga okungenani ngokubukeka, yakamuva imodeli umugqa kukhona imisebenzi yangempela yobuciko design. Nokho, ukuhlanganiswa eziphilayo sinesisindo lobuchwepheshe nesitayela angase aqhoshe ngayo, hhayi wonke amalungu Group Ibhajethi igesi izitofu.
Ukhiye Ukukhethwa sokunquma
Omunye nemingcele main ipuleti Ukukhetha kuyinto iyiphi inombolo futhi izitofu ahlukahlukene. imishini Standard kuhlanganisa bafudumale izikhundla ezine, ngasinye zazo ihlukile umlomo wombhobho ubukhulu. Amandla kagesi kanye nokucindezela igesi kuhlobene kwemigomo izitofu - ayanda bandwidth, ngokushesha lo msebenzisi uyakwazi ukuletha ukuba amanzi abilayo. Abanye abakhiqizi ukuphakela imishini futhi izakhi ezengeziwe egesi atomization. Ngokwesibonelo, cooker igesi "Darin" e GM141 ukuguqulwa has ukupheka izingxenye ezine kanye nesethi Imibhobho esemzimbeni ezengeziwe.
Ngakusasa isici esibalulekile - lingamandla lapho imishini esebenza. Ngokwesilinganiso, isilinganiso singamaphesenti 1.5-2 kW. Kunanzuzoni imodeli igesi, ngakho-ke kuba ukonga. Ukuthola yamandla aphezulu amasu bangathembela imingcele kuyamukeleka kaphethiloli. Kodwa ngamandla amakhulu nethonya ukuthi ukuhlala phakade isakhiwo. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba banake izinto lapho isitofu senziwa. ukwakhiwa Akubizi akusho ukusetshenziswa yekhwalithi ephansi Alloys. Ngisho e uhlelo kwesabelomali izinkampani ulwela ukuhlale ezingeni kahle nokwethenjelwa, usebenzisa insimbi engagqwali noma koqweqwe lwawo. Ubulula ukunakekelwa ezahlukene ingilazi-Ceramic ebusweni, kodwa uma nje isinqumo esivamile izingxenye ephakeme.
Ukusebenza izindleko igesi endzaweni lephephile
Uma imodeli ezibizayo kungenziwa kalula wehlulelwa ngendlela yemigomo lemisiwe ukusebenza, ne Ukugcizelelwa ezishintshayo esiphezulu inqubo ukupheka, isitofu igesi engabizi kudinga ngokucophelela uhlu oluphelele izici. ukusebenza Okubanzi Yiqiniso, ikhanga, kodwa azikwazi kuhlangene high quality design kanye amanani aphansi.
Nokho kukhona ukhetho, egcwele kuphoqelekile eziphansi Slabs. Lena ukuthungela ngokuyinhloko kagesi, i-thermostat futhi timer. Ezinguqulweni okuthuthukile ukwazi ukuhlangabezana igesi-ukuqapha kanye self-yokuhlanza uhlelo obusiza nokugcinwa imishini. Yiqiniso, kule ingxenye yokuqala futhi inikeza igesi isitofu, kodwa namakhono athile tekusebenta ngeke kulindeleke kuwo.
Izibuyekezo of the ipuleti, "Darin"
Thumela sokubuyekezwa emi GM141 nguqulo kusukela "Darina", okuyinto sesivele okukhulunywa. Lolu khetho luyatholakala emakethe ayizinkulungwane 10 kuphela. Hlikihla. Akukhona kakhulu ephansi ekupheleni, ikakhulukazi njengoba ukusebenza nekhwalithi ipuleti idlule alolu intengo. Amalungu uqaphele isitayela enkulu panoramic, ergonomic adjustable ukwesekwa isakhiwo, kanye emaphaketheni ezibanzi anezele ewusizo. Ikakhulukazi, igesi isitofu, "Darin" kule samuntu unikezwa gumbi nezomnotho iphrofayela ithebula grills. Lutho ekhethekile ngokohlelo lokuhlelwa ubuchwepheshe, lezi amadivaysi ungameli izindleko ubuchwepheshe kanye kancane abathintekayo, kodwa angasebenzi baqonde izinzuzo izesekeli ezifana.
Izibuyekezo izingqimba Gorenje
Kulokhu sikhuluma inguqulo G 51103 AW. Ngokusho abanikazi mthandazo oyisibonelo, izimfanelo zayo eshiwo ku electronics, ukuzilawula ngokuzenzekelayo futhi ukuthungela izinhlelo. Futhi, eziningi uqaphele ukunemba umsebenzi thermostat. Lezi izinzuzo kuthiwa kwahambisana usayizi ezincane kanye nomklamo stylish. Ngakolunye uhlangothi, igesi cooker Gorenje akusho bazitike umnikazi umthamo kuhovini yokugeza izitsha gumbi engangikulo.
Against isizinda abameleli entry level imihlomulo ukuguqulwa in ukusebenza, ezingeni lelisetulu ukuphepha kanye ukubukeka ezimnandi, okungadingi bonakalise elingaphakathi ekhishini zikanokusho kakhulu. Kodwa ngokuya Ergonomics, ezivelele izitsha lokhu akulona ikhambi engcono. Zithathelwe isimo kanye nokubaluleka kwamasiko okuyinto wakuqaphela lokhu isitofu igesi. Intengo ayizinkulungwane 14-15. Hlikihla. Le maki intengo ngeke kukhonjwe ngokuqinile isabelomali, kodwa esigabeni maphakathi angahambisani, ngoba ithengiswe plate-avareji yamaphesende ayizinkulungwane 17-20. Hlikihla.
Izibuyekezo izingqimba Beko
Ukuguqulwa CG 41111 G yabangela okubuyayo ezivela kubasebenzisi ngokusebenzisa inhlanganisela usayizi amancane ukusebenza eliphezulu. Nokho, ziphawuleka bewumsebenzi inkinga ngezikulu - ne izitofu kuhhavini ukunikeza bafudumale umfaniswano. gumbi umshini is uhlinzekwa namathe umsebenzi hlupha nokuthi kuwe kutholakele ukukhanyiselwa. Nge amakhono afana, kusobala ukuthi umenzi abakwazi silondoloze ezingeni lelisetulu ukusebenza - kusenzima amandla ongaphakeme futhi sinamakhono alinganiselwe ekuphekeni igesi isitofu. Imodeli intengo kuyavumelana ngokuphelele nalo amakhono ayo - ruble ayizigidi 11 ..
Izibuyekezo izingqimba "Hephaestus"
3200-08 Series imodeli kusukela umkhiqizi Belarusian "Hephaestus" Ombonisa ukuthembeka okuhle futhi kalula ukusebenza. Le nqubo kuba babathanda kakhulu, ukubukwa olandelanayo kwi inhlangano ekhishini isikhala. Iqiniso lokuthi imodeli yayifana kakhulu Ergonomics zebhodi KwabaseSoviet Kwakugxile Khona - yebo, ukulungiswa sina namuhla. Engingakusho nje ukuthi kuyinto esishubile igesi nge eziko, lapho ukulawula Lencwajana enikeziwe. Technical eliqoshiwe kokushiya inkathi ayikwazanga ukusebenzisa kanye minuses. Amalungu uqaphele ukungabi khona cishe yonke ongakhetha yesimanje electronic. Ngokuphazima avtopodzhiga isitofu, ukulawula igesi kanye hlupha kuhhavini. Kodwa amaphutha obusebenzayo kuthiwa ihlawulelwa nokwethenjelwa kanye nokusebenza high, okuyinto ezingavamile ingxenye kwetindlu letibita kancane onobuhle.
Indlela ukhethe best?
Ububanzi ivumela igesi endzaweni lephephile nokokusebenza ikhishi elincane nezimfuneko sakugcina ngenqubo ukupheka, futhi enkantini mini-lasekhaya. Into esemqoka - ilungelo ukuchaza nezimfuneko zomsebenzi nokusebenza okufanele zifinyelelwe igesi isitofu. ukwakhiwa ezingenziwa, njengoba umthetho, akahlukile yingcebo izici nokusebenza, kodwa futhi kule ingxenye kukhona izinketho uyakufanelekela ukuphi. Ngokwesibonelo, i-ikhishi elincane, ungakwazi ukuthenga imodeli compact nge namandla alinganiselwe, kodwa isethi olubanzi okukhethwa kukho okuseqophelweni. Ukuze ikhishi elikhulu ngeke zivumelane cooker ezinamandla nge ezingeni lelisetulu ukusebenza nokwenziwe lula ukulawula lokukhanda.
Lapho ekhetha isitofu igesi ukucabangela into eyodwa ngaphezulu - nokuvikeleka. Lolu hlobo izinto zasekhishini kubhekwa ayingozi kakhulu ngenxa ingozi igesi ukuvuza. Kufanele uqaphele ikakhulukazi zokuhlola izinhlelo zokuphepha lapho ekhetha onobuhle zamanani aphansi. Ngokuvamile, umhlahlandlela igesi isitofu yethula ukuba izingozi ezingaba khona e section ekhethekile, okuyinto unikeza isiqondiso ukuqaliswa ukufakwa. Ngaphezu ukufakwa efanele futhi uxhumano, kufanele acabangele ukutholakala nokuvikeleka electronic, kuhlanganise umsebenzi nokulawula igesi-system. Kodwa, ngokuvamile, ubudlelwano phakathi price tag nokwethembeka esimweni igesi izitofu mbuzo. Okungenani, kukhona eliphansi nokuvikeleka ngezansi lapho abakhiqizi angawi.
Hlola valve futhi indlela elisebenza ngayo
Indlela hang isithombe ngaphandle izinzipho ngesikhathi lodonga bebodwa
Sea Umusa Aparthotel 3 * (Sunny Beach, Bulgaria): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza
Mercedes 600, imoto edume of esidlule
Esikhathini ekhaleni, izilonda abandayo: nendlela alulame ngokushesha ngangokunokwenzeka?
League of Legends, onkulunkulu iqhawe (onkulunkulu): Hyde